Disemba - isikhathi ukuhlobisa igumbi loNyaka Omusha. Kuyishwa ukuthi leli holide kwenzeka kanye kuphela ngonyaka. Lapho ngifuna ukwenza ikhaya nenhle, udala umkhathi samaholide ukuthi esiyokhunjulwa isikhathi eside. Kuwo wonke umndeni ngezindlela yaso engokwesiko ukuhlobisa indlu for the holiday, kodwa ukufunda okuthile okusha akukaze kube engadingekile.
Hlobisa igumbi loNyaka Omusha ngezindlela eziningana. Ngokwesibonelo, hang tinsel, nemiklamo, Christmas amathoyizi. Ungabeka sikakhusimusi egumbini, ukulungisa izimbali isitsha sezimbali noma wenze "izingadi ulenga" izimbali. Ezinye ukuthenga zokuhloba esitolo, futhi umuntu owenza bebodwa.
Qala ukuhlobisa indlu kungaba umnyango. Ulenga ngaphandle umqhele omuhle amagatsha fir ukugcizelela umoya wokupha abantu abahlala endlini. Ngaphezu kwalokho, i uphawu-accessory ezinjalo kuba ukuceba. Thenga lokhu umhlobiso kungaba esitolo, noma ukwenza kwezandla zakho. Ngaphezu amagatsha ngesihlahla sonwele noma fir, bheka Izigaxa ezinkulu, izinkanyezi, amantongomane, zihambisana ephepheni enhle.
Imibono, indlela ukuhlobisa igumbi, kungatholakala omagazini. Kusukela ngo-September, ziningi izincwadi ukushicilela ezintsha izixazululo.
Uphawu oyinhloko yoNyaka Omusha WamaShayina - Isihlahla sikaKhisimusi. Ngaphambi hang on amathoyizi akhe, kudingeka unqume ukuthi yimiphi kuyoba ububanzi esikhulu, ukuphinda kulo indlu. Ukuze ukhethe isitayela esisodwa, kuyilapho yokugezela kanye efulethini uyobheka samaholide ikakhulukazi futhi imfashini.
Hlobisa igumbi ku tinsel kaNcibijane kanye nemiklamo eyenziwe. Kodwa manje-ke unikeza ezihlukahlukene enkulu zalapho zemikhosi, futhi akudingekile ukuba uhlanganise zonke izinhlobo egumbini elilodwa. Ngaphambi kokunquma indlela ukuhlobisa elihle lezimbali ikamelo, kudingeka uthole ukuthi yini ukulungele ukunikeza imibono embonini yethu namuhla.
Ufuna ukwenza igumbi agcwala, kodwa angazi kanjani ukwenza lokhu? Silula - hang egumbini abahlukahlukene nemiklamo kagesi. Hhayi okuningi kukhona izinhlobonhlobo ukuthi Site le njongo.
Lezi nemiklamo libukeke ikakhulukazi, badinga ugesi kancane kakhulu. LED zisetshenziselwa ukuhlobisa eminyango, nemisayipuresi noma evele ezingenziwanga ukufuthelana. LED kwasemuva inzuzo salokhu ukuthi amanzi, ngakho-ke kungenziwa hung ngisho noma sisendlini encane.
Gobisa tape lapho kwaku ezakhiwe ama ezincane. Lezi nemiklamo athé kuhlekisa, zingabantu efanelekayo umhlobiso ekamelweni isitayela 50s.
Kuyinto intambo nezimo of neon. Self-umhlobiso egumbini Rope luhlaza, kodwa ukugqamisa ipherimitha nalo eyamukelekayo ngempela. Ungenza bobunjwa ezahlukene intambo, okuwenza aqondane ku amafasitela noma izindonga egumbini.
Ukwazi okungenani ulwazi ubuncane mayelana nezinhlobonhlobo lolu hlobo kukhanyisa uzisebenzise kanjani, kuba lula kakhulu ukunquma indlela ukuhlobisa ikamelo nge wezimbali. Khetha ukubukeka futhi isixazululo design kumele kusekelwe kangakanani umphumela ufuna ukufeza ekugcineni.
nemiklamo zokuhlobisa zingenziwa iphepha noma amagatsha zokwenziwa fir. Fir lezimbali Kungcono ukuthenga esitolo, ngoba kukhona asikho isidingo sokwenza ngokwakho kusuka amagatsha yokufakelwa.
Paper imihlobiso kungenziwa ngokuzimela noma njengoba etholakala esitolo. Ukukhiqizwa Decor iphepha kungcono ukuphathisa izingane - ngakho bazozizwa ukuhileleka kwabo umkhosi.
umklamo agesi ukuhlobisa amafasitela, izindonga ekamelweni, ngesihlahla sonwele saseYurophu emi. Ngaphambi lezimbali ukuhlobisa igumbi, khumbula ukuthi kufanele kube atholakale izilwane nezingane ezincane. Akukona nje kuphela ukuthi, bangase kulimaze accessory ngogesi, ngakho basengaba umlilo noma ubuhlungu ngokwabo. Ukubusa ukubeka izinto zikagesi - badinga hang kakhulu kunezingane ezisencane.
Ukuze itafula imihlobiso, fireplaces, bele zangaphansi ingasetshenziswa kokubili lezimbali kagesi kanye zokuhlobisa, lacing ndawonye. ukwakhiwa okunjalo kuyokwenza zibukeka zizinhle nokuthi kusihlwa, futhi emini.
Hang lezimbali endaweni emnyango, enamathiselwe ophahleni - noma inketho kwamukelekile. I emikhulu indiza, iphethini mnandi kungadalwa.
Ukuze uqonde ukuthi enhle lezimbali ukuhlobisa igumbi, bheka izithombe - izinhlobo Ornamental ubekwe amatafula, amakhabethe, izindonga eminyango. Emhlabeni Iqhwa futhi ngeke kufaneleke ukubeka wezimbali.
Ngaphambi tinsel ukuhlobisa igumbi, udinga stock up linani lelifanele le nto. Qala efasiteleni. Ukusebenzisa i-tape noma izikhonkwane, ukwenza indlela yokuphepha tinsel azungezwe ewindini futhi wenze wafana kugridi. Uma usikhethe nge wezimbali, buka kuyoba nenhle nakakhulu.
Uma ufuna ukuhlobisa amakhethini - bangathumela hang izingcezu, eyenziwe tinsel ahlukaniswe on a wire. kube Ngakho sikwazi ukunikeza it ukuma zamakhekheba eqhwa, sonwele umnsalo, izinkanyezi. Ngaphezu kwalokho, kuyafaneleka ukwenza izinombolo ngonyaka ozayo, futhi uhlanganyele nabo endaweni egqamile. Izibalo Ungase futhi ukugqamisa wezimbali. Uma indlu incane izingane, imihlobiso kuwufanele hang ephakeme.
Tinsel futhi zigxilé nophahla ngaphakathi, azungezwe sangemuva. Kuyoba ezithakazelisayo uma kwaphumela hang lezimbali ngokuqondile, kodwa amagagasi. Bahlanganise lezi izingoma kungenzeka izikhonkwane.
Ukuze ukubhaliswa lemigubazi kudingeka uthathe tinsel omangalisayo futhi ukukulungisa azungezile. Ngesikhathi esifanayo ngasemnyango ake imvula ukulengiswa ngentambo. Iqhwa mpahla tinsel, oyinyoka, Izigaxa.
Ngokuvamile, ukuze unqume ukuthi ukuhlobisa igumbi tinsel, kungcono ukulalela umbono wakho ngezinto isitayela isifiso. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ekamelweni elikhanyayo futhi elikhanyayo, noma ingabe uncamela Classic ethule, egcwele zasemazweni Christmas Ukukhalipha nesizotha nemiklamo kagesi?
Lapho ihlobise ikamelo iziphi izinto okufanele ungakhohlwa mayelana izesekeli ukuthi egumbini njalo. Phezu kodonga kuthé nesibuko? Kungaba okukhulu ukuze bagqoke up noma iyiphi izinto. Sebenzisa noma iyiphi ucezu omunye olubonisa indawo ezungezile noma wenze laqanjwa kubo - incike okuthandayo. ukubukeka Excellent nokwelukiweyo nemiklamo ka tinsel, amagatsha fir eyingqopha Izigaxa. Esikhundleni tinsel ingasetshenziswa isikhathi eside lezimbali kagesi.
Uma nje awukwazi ukunquma indlela ukuhlobisa igumbi elihle lezimbali, zingenziwa abaklami ingaphakathi - ngakho unokuthile sigqoke up ikamelo ukuze kuzoba kuphela ziyashaqeka zibuye ngokumthanda.
Kodwa kungakhathaliseki ukuthi unquma ukuhlobisa ikhaya lakho loNyaka Omusha, into ebaluleke kakhulu kuye yayibuswa induduzo, ukuthula, injabulo nemimoya okusezingeni eliphezulu, hhayi kuphela ngesikhathi samaholidi, kodwa futhi umsebenzi nsuku zonke. Zama umuzwa inganekwane futhi magic unyaka wonke, bese uyoletha izindaba ezinhle kuphela kanye nezinguquko.
Indlela yokwelula izicathulo eyenziwe Suede noma isikhumba
Indlela vimbela lokhuni yokungena emnyango?
Isikebhe eyenziwe amabhodlela epulasitiki. Kungcono ngizame
Ukulungiswa kwekhibhodi yekhompiyutha yokumisa kanye ne-laptop
Thumba Abscessed: ukwelashwa, ikhodi ye-ICD